Analamahitsy Ireo mpanendaka mampiasa moto indray no hazain’ny polisy
Betroka sy ny manodidina Fiarahamonina ifotony tsy voafehy no mahatonga ny korontan-dava
Laharam-pahamehana ao Betroka ary efa nodradradradrako hatramin’ny taona 2007 fony aho tsy ben’ny tanàna fa tsy handroso
IMERIMANDROSO Tsy omby intsony fa olona no alain’ny dahalo
Miaina anaty fitaintainana tanteraka ireo mponina ao anatin’ny kaominina Imerimandroso, distrikan’Ambohidratrimo.
Tafika ana habakabaka Tena ilaina amin’ny fametrahana fandriampahalemana
Nanatanteraka fitsirihana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato sy teny amin’ny kianja « Soamandrakizay » ny praiminisitra ny harivan`ny 03 septambra 2019 ary niaraka tamin’izany dia nisy ny lanonana namoahana mpanamory angidimby tamin’ny fomba ofisialy, notanterahina tao amin’ny foiben’ny Tafika ana habakabaka Malagasy.
Tsy filaminana eto amin’ny firenena “Misy andraikitra tsy efan’ny fitondrana.”
Malahelo amin’ny fisian’ny tsy filaminana eto amin’ny firenena izahay mpiaro ny zon’olombelona, hoy ny filohan’ny fikambanana Zon’olombelona mampandroso vahoaka sy Zon’olombelona mijoro,
Polisim-pirenena Nahazo tale vaovao telo
Lanonana telo sosona no notanterahina teo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka ny alarobia 14 aogositra 2019 teo, dia ny fifamindram-pitantanana teo anivon’ny DRH (Direction des Ressources Humaines),
Mpanao politika efa adinodino Mety hipoitra indray
Na tsy mbola fantatra aza ny tena daty ofisialy dia naman’ny azo lazaina foana hoe akaiky ny fifidianana ben’ny tanàna. Be ny zava-nanaitra teo amin’ny tontolo politika tato ho ato.
Fakana an-keriny sy asan-dahalo Mpanao “kidnapping” 5 lahy tratra
Tratra ny jiolahy miisa 5 naka an-keriny zazalahy 12 taona tany Betela Morarano Kraoma, distrikan’Amparafaravola ny harivan'ny 16 jona 2019.
Efa manana ny tetikadiny ireo mpitandro filaminana manoloana ireo mpitondra fiara kodiaran-droa manakan-dalana eny Analamahitsy, indrindra manomboka takariva. «Handray ny fepetra amin’ireo
mpitaingina moto manenjika fiara sy mikasa hanao asa ratsy izahay. Amin’ny ankapobeny, efa voafehy tanteraka ireo mpanendaka mandeha an-togotra manatanteraka ny asa ratsiny amin’ny olona anaty fiara miakatra avy aty Andranobevava hihazo an’Analamahitsy, mandritra ny fitohanana. Efa any am-ponja ny ankamaroan’izy ireo ary ireo tafaporitsaka tsy sahy intsony satria nanova paik’ady maro hatrany izahay nanamborana ireo tafiditra tao anaty haratonay. Hojerenay akaiky ity endrika vaovao fandrobana fandehanana fiara ity izay ataon’ireo olon-dratsy mpitondra “scooter” saingy tsy ambara etoana ny tetika.” Io no fanambaran’ireo polisy nitafa manokana
tamin’ny mpanao gazetinay izay miandraikitra ny faritra Analamahitsy. Araka ny angom-baovao azo, misy vitsivitsy ireo mpampiasa iny lalana iny no efa notandindomin-doza. Mitantara ny lehilahy iray efa tojo ny tranga. “Manomboka eo amin’ny “rond point Masay”, misy roalahy manaraka amin’ny moto, mibahambahana eo aloha ka raha miahotra na mijanona dia avy ireo mpanao ratsy ireo. Mila hidina mandrakariva ny varavaran’ny fiara. Efa voamarina fa mpanendaka ireo, ary manaraka hatrany Ambatobe na Ambohitrarahaba. Tsahivina anefa fa anisan’ny faritra milamina ny eny Analamahitsy araka ny saritany sy ny tranga, raha ampintahaina amin’ireo faritra hafa, hoy hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny polisim-pirenena izay misahana ny boriborintany fahavalo ka azo antoka fa hofehezin’ireto farany ity raharaha ity.
Mampitaraina ireo mpampiasa lalana ny fanarahan-dia sy fibahanan’ ireo olon-dratsy mpitondra scooter eny Andranobevava sy Analamahitsy.